Fantsom-pandrefesana varahina miorina amin'ny heat exchanger - mpanamboatra milina fanodinana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Varahina famarotana hafanana ho an'ny fantsona varahina
- Diameter / hatevin'ny fantsona ivelany: 12.5 x 0.35 sy 16.75 x 0.4
- Karazana fivoriambe: fitambaran-damba
Peratra vita amin'ny allaing
DW-UHF-6KW-III mihary fanamafisana fampitaovana famoronana ankosotra
Fotoana: ≈ 10s
Mpanamboatra hafanana hafanana ho an'ny indostria samihafa maniry ny hampitombo ny fiarovana ny tahiry sy ny famokarana mandritra ny dingan'ny fanimbana.
Nahazo santionany amin'ny fanafanana hafanana izay ampahany amin'ny fivoriambe tena izy (10 metatra mahery). Ny tanjona dia ny hamantatra ny famolavolana mety indrindra ho an'ny coil mahazatra izay ahafahana mampihatra ny fampifangaroana ny tonon-droa miaraka miaraka.
Ny ekipan'ny HLQ dia nanoro hevitra tamin'ny fampiasana UBraze izay finday vahaolana fametrahana avotra azo ampiasaina ho unit-tanana na azo ampidirina amin'ny sandry robotic ho an'ny famokarana automatique.
Tests nanao fitiliana nifanentana amin'ny toerana tena misy ny hafanana amin'ny famokarana hafanana amin'ny famokarana mba hanatsarana ny fomba fiasa marina. Nampiasa coil natao namboarina manokana izahay miaraka amina fampirimana hanampiana ilay mpandraharaha hahatratra valiny haverina, ary koa hampiakatra ny tahan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanakorontanana 2 tonony mandritra ny 10 seg. Vokatr'izany, ny fifandraisana mihoa-pampana dia lasa azo antoka sy maloto-porofo.
Raha oharina amin'ny fanodinana jiro entona, ny famatsian-drano dia tsy mamoaka afo misokatra, ka azo antoka kokoa ho an'ny mpandraharaha. Ny dingana haingana sy ny famerimberenana azo antoka.
Ny fifanakalozana amin'ny hafanana dia fitaovana ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny orinasa maro - ny famatsian-habakabaka, ny vata fampangatsiahana, ny fametrahana rivotra, ny tobin-jiro, ny zava-maniry simika, ny fitrandrahana solika, ny fanamboarana solika, ny fanodinana entona voajanahary ary ny fitsaboana ny fanodinana.
Ny fifehezana tsara amin'ny fotoana sy ny hafanana izay miteraka kalitao sy vokatra azo hatrany
Ny dingana azo averina, fa tsy miankina amin'ny mpampiasa
Sokajy Technologies Tags brazing copper, bozaka varahina, varahina exchanger hafanana, famafazana fantsom-barotra exchanger hafanana, Fantsona famonoana hafanana mikotrika, induction brazing, induction brushing copper, induction bronze copper tube Post Fikarohana